Abavelisi beZincedisi-iFactory yeziThuthi zaseTshayina, ababoneleli
19.05mm ibhanti pitch pitch c...
57.15mm 63.5mm inowuthi enkulu ...
2inch pitch imodyuli ibhanti...
27.2mm 38.1mm pitch edumileyo...
Ibhanti yeplastiki eyi-intshi eyi-1 ...
IsiKhokelo sikaloliwe / Isinxibo sokunxiba / izixhobo zokuhambisa
I-HONGSBELT ibonelela ngezixhobo ezifanelekileyo kwimigca yokuhambisa:
Izihlalo ezigobileyo kunye nesikhokelo somzila ojikayo - izihlalo ezigobileyo ze-HONGSBELT zeendlela ezijikayo zinokubonelela ngesikhokelo esikhokelayo, kwaye emva koko unikezele nge-hiah-guality running.
Umphezulu weepleyiti zekhonkco kunye nenethiwekhi yekhonkco phantsi kwemisebenzi yexesha elide. Izikhokelo ze-HONGSBELT zibonakaliswe ngamagobolondo angenasici kunye nezinto ezifakwe kwikhwalithi ephezulu.
Iintlobo ngeentlobo zemathiriyeli ebethelelwe ziyafumaneka: I-UHMW, imathiriyeli eyodwa yokhuhlane oluphantsi. Kwaye izinto ezichasene ne-static. Zonke izixhobo zidlulile isatifikethi se-FDA, kwaye zinokusetyenziswa kwiindawo ezininzi zesicelo.